50W Ukukhanya kweLat Street Street China Manufacturer
Inkcazo:Iimpawu zokupaka kwelanga ngaphandle,Imilayezo yeeLed Street Led Street,Indawo yokupaka iLowlar Lights Canada
Home > Imveliso > Iimpawu zokuLungiselela ukuPaka > Iimpawu zokuLungisa iiLanlar Led > 50W Ukukhanya kweLat Street Street
Umzekelo No.: BB-LD-ST-50W
Ukuqulunqwa komntu omnye kunye kunye nekamva ekukhanyeni kwetheknoloji kwenza le mibala yokupaka i-Solar ngaphandle inkokeli yeklasi xa kuziwa ekukhuseleni imeko yakho yangoku. Ipaneli yelanga yamandla aphakamileyo asetyenziselwa kwiLove Outdoor Parking Lot Lighting unikele ngeeyure eziyi-8-10 zokukhanya okuqhubekayo ngaphandle kwento epheleleyo yokunika ukukhanya okubalulekileyo xa intshukumo yokuhamba yesikhombisi esakhiweyo ngaphakathi kwendawo.
Iindawo zokuPhatha kweLanga leLanga eCanada ikhanya kuphela ebusuku. Ebusuku i- solar power enabled led lights zihamba ngendlela edibeneyo kwaye ihlala imodi edibeneyo kude kube kuhambelana nokunyuka kwaye ukukhanya kwe-LED kuza ekukhanyeni okupheleleyo imizuzwana engama-30. I-teknoloji ye-LED, idibaniswe ne-detectors yokunyakaza, yenza kwakhona ukukhanya kwezibane zesitrato ezixhaswe ngezentengiso ezikhethiweyo, ukhetho olungaphantsi kwamashishini kunye namakhaya abucala.
Iimpawu zokupaka kwelanga ngaphandle Imilayezo yeeLed Street Led Street Indawo yokupaka iLowlar Lights Canada Iimpawu zendawo yokupaka ngaphandle Iimpawu zokukhanya kwelanga Indawo yokupaka ukukhanyisa ngaphandle Iimpawu zokuLawulwa kwelanga Iimpawu zelanga ezixhasiweyo ngaphandle